Tumira Wako Martech Zone Chinyorwa | Martech Zone
Tumira Wako Martech Zone chinyorwa
Ndokumbirawo usabvunze kana uchigona kuendesa chinyorwa, chete tumira chinyorwa apa. Handina nguva yekuongorora zvikumbiro.
Ndine bhajeti rakabhadharwa kuti ndikwirise kusvika kwechiratidzo chako kunowanikwa zvakare:
Kana chinangwa chako chiri backlinking, ndapota enda.
Inofanirwa kuve yekushambadzira tekinoroji inoenderana. Kwete nhau dzemakambani, kukwidziridzwa, kana kudyara
Mataurirwo: mazana manomwe kusvika kumakumi maviri emazwi, tsanangura dambudziko, maitiro akanakisa ekugadzirisa dambudziko, uye kuongororwa kwemhinduro yako. Sanganisira chinongedzo apo mumwe munhu anogona kutora nhanho inotevera - demo, kurodha pasi, nezvimwe.
Screenshots, madhayagiramu, logo, uye vhidhiyo zvese zvinokurudzirwa (chero imwe chete).
Chirevo kubva kune muvambi kana mutungamiri anofunga mukati mekambani kubata kukuru.
Nyaya yekushandisa kana nyaya yevatengi ine simba rinotyisa.
Kana iwe uchida kuve munyori, isu tinofanirwa kuve ne kero yeemail inoshanda yemunyori (kwete PR yakasimba) uye ivo vanofanirwa kunyoreswa nemufananidzo pane Gravatar kana pikicha inosanganisirwa.
Iwe wakasununguka kuisa kufona kune chiito kudzokera kune yako saiti kune demo, kurodha pasi, nezvimwewo ingo tiudze.
Kana iwe uchida kusanganisa chishandiso, tizivise. Tine zvishandiso zvakati wandei nezvibvumirano zvekutumira kune iwo makambani.
Heino muenzaniso wakasimba watakashanda nawo Ita-Pane Software.
Takasununguka kugadzirisa zvirimo, kuzvimisa, kuzvibvisa, kuzvimisikidza, kuzvitungamidza, kana kuita chero chimwe chinhu nazvo kuti tione kuti tinochengeta chinyorwa chemhando yepamusoro chevaverengi vedu.
MM anodambura DD slash YYYY
Nekuendesa iyi fomu, unobvumirana neZVO zvese zvinotevera.
Ini handisi kubhadharwa kuti ndiise backlinks kuti ndivandudze nzvimbo dzekutsvaga
Ndiri kutumira chinyorwa chekutanga chisina kuburitswa kana kugoverwa kumwewo
Ini ndinonzwisisa nekutumira izvi zvemukati kuti zvinogona kugadziriswa kana kubviswa chero nguva pasina mvumo yangu
Ini ndinonzwisisa kuti hapana vimbiso yekuti chinyorwa chinozoburitswa kana nguva yekuburitsa
Kambani, Chigadzirwa kana Sevhisi*
Uri kusanganisira icho chaicho chinyorwa here?*
Zvese zvinyorwa zvinofanirwa kunge zviri 100% zvepakutanga uye zvisina kutumirwa pane chero imwe saiti. Iwe unofanirwa zvakare kusanganisira zita remunyori, email kero, uye musoro.
Kwete - ichi chikumbiro chingangobviswa.
Ehe - ndakanamatira zvese zvawakumbira.
Hongu - asi tinoda Douglas Karr kuva munyori
Munyori Email Kero
Munyori byline HAZVIGONESWE pasina kero yakananga yemunyori Hapana anosara.
Munyori LinkedIn URL
2 kusvika ku4 mitsara.
Headshots, Logos, Screenshots uye/kana Zvinyorwa
Yakagamuchirwa faira mhando: jpg, gif, png, doc, zip, docx, Max. saizi yefaira: 50 MB.
Chero zvinyorwa zvepamberi zvinoda zita chairo, email yakanangana nemunyori, musoro wepamusoro, uye 2 kusvika ku4 mutongo biography. Tinogona zvakare kusanganisira chero ehupenyu hwevanhu kero. Ndokumbirawo zip uye upload.
Iwe une chinopihwa kana kufona-kune-chiito?*
Kana iwe ukapa chinopihwa pane chako chinyorwa, iwe unowana mhinduro iri nani. semuenzaniso. Shandisa kodhi MARTECHZONE YEMAHARA 10% kubviswa. Ndokumbira upe chinongedzo chekuenda.
Kana iwe uine chirongwa chekubatana isu tinogona kujoina, isu tinowanzoita kuti izvi zvibudiswe.
Paunenge uri pano ...
Iwe unoda kunyorera kune yedu tsamba tsamba?